ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် သံဓါတ်ရဲ့ အရေးပါပုံများ | OnDoctor
ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် သံဓါတ်ရဲ့ အရေးပါပုံများ
သံဓာတ်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တော်တော်များများမှာ အရေးပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် အဆုတ်မှ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသို့ ပို့ဆောင်ပေးသော သွေးနီဥများမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟေမိုဂရိုဘင် (hemoglobin) ပရိုတင်း ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ အင်ဇိုင်းဓာတ်တွေမှာလည်း ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
သံဓာတ်ချို့တဲ့ရင် သွေးအားနည်းရောဂါကို ခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတာကို လူအများစု သိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သံဓာတ်ရဲ့ အခြားအ‌ရေးပါတဲ့ အချက်တွေကိုတော့ သိပ်မသိကြ‌သေးပါဘူး။ အထူးသဖြင့် သံဓာတ်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအားစနစ်မြှင့်တင်ရာမှာလည်း ပါဝင်နေတဲ့ အချက်ပါ။
သံဓါတ်က ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် ဘယ်လိုအ​ရေးပါသလဲ?
ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် အ​ဓိကအရေးပါတဲ့ lymphocytes​ ခေါ် ​သွေးဖြူဥဆဲလဲများ ထုတ်လုပ်​နိုင်ရန်အတွက် သံဓါတ်လိုအပ်ပါတယ်။
လူခန္ဓာကိုယ်အတွက် သံဓါတ်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းက​တော့ အဆုတ်မှ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကို ​သွေးထဲကတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်အသီးသီးဆီသို့ ပို့​ဆောင်​နိုင်ဖို့ ကူညီပေးရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆဲလ် တွေဟာဆိုရင် အောက်ဆီဂျင် လုံလုံ​လောက်​လောက်ရရှိမှသာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်း​​တွေကို အသီးသီးလုပ်​ဆောင်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက်အ​ရေးပါတဲ့ ဆဲလ် တွေလည်း အောက်ဆီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့ အ​ရေးကြီးပါတယ်။
ဒီ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ သံဓါတ်က အဓိက​နေရာမှ ပါဝင်လုပ်​ဆောင်​ပေး​​နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် ​နေ့စဥ်သံဓါတ်ပမာဏ လုံ​လောက်စွာရရှိနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လူကြီးတစ်ဦးအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ သံဓာတ်ဟာ တစ်နေ့ကို 7-18 mg လိုအပ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် 27 mg လိုအပ်ပါတယ်။
သံဓါတ်ချို့တဲ့ရင် ​ဆဲလ်တွေဟာ အောက်ဆီဂျင် လုံလုံလောက်လောက် မရတဲ့အတွက် သွေးအားနည်း​ရောဂါဖြစ်လာနိုင်သလို ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက်လိုတဲ့ cells ​​​တွေဟာလည်း ​ကောင်း​ကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်​တော့တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဝင်လာတဲ့ ပိုးမွှား​တွေကို ​​ကောင်း​ကောင်းတိုက်ထုတ်နိုင်​တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သံဓါတ်ဟာ သွေးနီဥ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သံဓါတ်ချို့တဲ့လာတဲ့အခါ သွေးအားနည်းရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ရင်တုန်ခြင်း၊ မောပန်းလွယ်ခြင်း၊ အသက်ရှုမဝဖြစ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်း စတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပါ ခံစားရလာနိုင်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် သံဓါတ်ပိုလိုအပ်တာက​တော့ ကိုယ်ဝန်​ဆောင်နိုင်တဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး​တွေ၊ ကိုယ်ဝန်​ဆောင်အမျိုးသမီး​နဲ့ နို့တိုက်မိခင်​တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး​တွေဟာ လစဥ်​သွေးဆင်းခြင်းကြောင့် သံဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုပိုများရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်နို့ရည်မှာ သံဓါတ်ပမာဏနည်းပါးတာကြောင့် နို့စို့ကလေးငယ်တွေမှာလည်း သံဓါတ်ချို့တဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်ပကနေ သံဓါတ်ကို ဖြည့်စွက်တိုက်သင့်ပါတယ်။
သံဓါတ်ကို ဘယ်အစားအစာတွေက ရနိုင်လဲ?
သံဓါတ်ကို အသား၊ အသည်း၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပင်လယ်စာ၊ ကြက်ဥအနှစ် နဲ့ ဟင်းနုနွယ်အစရှိသော အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိတဲ့အရွက်တွေကနေ အများဆုံးရနိုင်ပါတယ်။
ပန်းသီး၊ ဌက်ပျောသီးနဲ့ သလဲသီးတွေမှာလည်း သံဓါတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
သံဓာတ်ကို Heme iron နဲ့ Non heme iron ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ Heme ironကို ကြက်သား၊ ဝက်သား၊ အမဲသား နှင့် ပင်လယ်စာတွေမှ ရရှိပြီး Non heme iron ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှ ရရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရရှိတဲ့ သံဓါတ်ရဲ့ 90 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို Non heme iron ကနေ ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Vitamin C နှင့် Vitamin A ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအ‌‌သောက်တွေဟာ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို အားပေးပြီး ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်၊ ဝိုင် နှင့် polyphenols ဒြပ်ပေါင်းပါဝင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် သံဓါတ်ကို လုံလုံလောက်လောက်မရရှိသူတွေဟာ သွေးအားနည်းရောဂါအပြင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားပါ ကျဆင်းနိုင်တာကြောင့် သံဓါတ် မချို့တဲ့စေရန် ဂရုပြုပြီး နေထိုင်စားသောက်သင့်ပါတယ်။
သံဓာတ်စုပ်ယူခြင်းကို လျော့နည်းစေနိုင်သော အစားအစာများ။
ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း သက်သာစေဖို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ